के रवि र दिपक विच कुटाकुट भएकै हो ? यस्तो छ वास्तविकता::News from Nepal
रमेश प्रसाईको सपना रवि लामिछानेले पुरा गराउँने !
न्युज २४ टेलिभिजन बाट प्रसारित हुने लोकप्रीय कार्यक्रम सिधा कुरा जनता सँगका संचालक रवि लामिछाने । धरानमा रहेर जब कुनै ताजा विषय आउँछ तव कडा आवाज मा गुन्जीने रमेश प्रसाइ । दुवैले जनताको आवाजलाई फरक माध्यम र तरिकाबाट सशक्त रुपमा बोलीरहेका छन् । रवि लामिछानेका विषयमा कसैले कुनै नराम्रो कुरा गर्यो या रविलाई कुनै समस्या पर्यो भने सबै भन्दा पहिला रविको प्रतिरक्षामा सशक्त आवाज बनेर निस्कने व्यक्ति हुन् रमेश प्रसाइ । पछिल्लो समय रवि र रमेशको दोस्ती निकै जमेको छ ।
भारतीय प्रधामन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमणको बेलामा समाजिक संजाल फेसब्ुकमा एउटा भिडियो राखेर एकाएक चर्चामा आएका रमेशले त्यस पछि लगातार जनताका आवाजको प्रतिनिधित्व गर्दै बोलीरहेका छन् । अहिले रमेशले लाखौँको संङ्ख्यामा शुभचिन्तक कमाइसकेका छन् । यस विच उनले पब्लिक स्पिकर नेपालको टाइटल पनि जिते । उनले आफुले जितेको ३ लाख रकम मध्ये १ लाख रवि लामिछाने फाउण्डेसनले कालिकोट जिल्लाको रास्कोटमा निर्माण गरिरहेको रास्कोट सामुदायीक अस्पतालको सहयोगमा रविलाई हस्तान्तरण गरे ।
त्यति मात्रै होइन उनले आफुलाई सम्मान गरेर प्राप्त भएका अन्य रकम पनि रविको अभियानमा सहयोग गरिरहेका छन् । रमेशले दिएको रकम लिन रवि धरानै पुगेर दुई विचको दोस्तीलाई अझै कसिलो पारे । रविलाई कतै बाट प्रहार हुँदा त्यसको प्रतिरक्षामा रमेशले निकै दरिलो आवाजमा विरोधीहरुलाई झटारो हान्ने गरेका छन् जुन रविका लागी धेरै ठुलो व्याकअप बनेको छ । रवि लामिछानेले पुर्व पत्नी सँग सम्बन्ध विच्छेद गरेर निकिता पौडेल सँग कानुनी विवाह गरेको बेलामा जव रवि धेरैबाट आलोचित भइरहेका थिए त्यति बेला रमेशले यति सशक्त भिडियो बनाए की त्यसले रविलाई निकै ठुलो सहयोग भयो ।
रमेशले त्यति बेलै रविको विवाहमा छमछमी नाँच्ने भनेका थिए अन्तत रमेशको त्यो धोको पनि पुरा भयो। केहि दिन अधि मात्र परम्परागत रुपमा बैवाहिक बन्धनमा बाँधिएका रवि र निकिताको पाहुना थिए रमेश । उनले विवाहमा नाँचेनन् मात्र मिठो मन्तव्य सहितको शुभकामनाले सबेको मन पनी जिते । निस्वार्थ रुपमा रविको रक्षाकवज बनेर निस्कीएका रमेश प्रति रविको यति ठुलो विश्वास रहेछ की को बन्छ करोपती कार्यक्रममा सहभागी हुँदा रविले आफ्नो फोन अ फ्रेण्ड लाइफ लाइन प्रयोग गर्दा रमेशलाईनै टेलिफोन गर्न लगाए । यस बाट पनि उनिहरुको दोस्ती र विश्वासको मापन हुन्छ ।
धरानमा रहेर काम गरिरहेका रमेशको धोको छ नेशनल टेलिभिजनमा एउटा कार्यक्रम चलाउँने । रविले पनि रमेशको लक्ष्य पुरा गर्न सघाउँने बचन दिइसकेका छन् । निकै जमेर अगाडी बढिरहेको यो दोस्तीले बाँकी के के गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।